Safal Khabar - मिडिया तिनको हातमा छ जसको काम पत्रकारिता होइन
बुधबार, ३१ असार २०७७ (Wednesday, 15 July, 2020)
#प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली
मिडिया तिनको हातमा छ जसको काम पत्रकारिता होइन
सोमबार, ०७ पुष २०७६, १६ : १९
- रविश कुमार
यदि मिडिया यिनलाई देखाउँदैनन् भने हामीले नै सम्पूर्ण देशबासीकहाँ यसलाई पु-याउनुपर्छ । यसलाई भाइरल बनाउन सहयोग गर्नुस् ।
मेलै यस्ता सन्देश भएका कैयन् भिडियो हेरिसकेको छु । ती भिडियोमा प्रहरी आफैँ धनमालको नोक्सानी पु-याइरहेका हुन्छन्, पसल र बाइक तोडफोड गरिरहेका देखिन्छन् ।
प्रहरी घरभित्र पसेर मारपिट गरिएका र गल्लीमा पसेर मारपिट भएका धेरै भिडियो भाइरल भएका छन् । यसलाई देखेर सजिलै बुझ्न सकिन्छ कि मिडिया नहुँदा मानिसमा कति धेरै छट्पट्टी फैलिएको छ ।
जबकि प्राप्त सम्पूर्ण सूचनालाई पुष्टि गरेर मानिस माझ सम्प्रेषण गर्नु मिडियाको काम हो । तर जुन स्थानबाट भिडियो आइरहेको छ, तिनको कतै पनि रिपोर्टिङ भएका छैनन् ।
यो मिडियाको ब्रेकडाउन (असफलता) हो । तपाईंले कानुन र व्यवस्थाको असफलता सुन्नु भएको होला । भारतमा कानुन र व्यवस्था जति असफल भए पनि मिडिया कहिले पनि अहिले जसरी चुक्दैनथे । पत्रकार, भिडियोग्राफर र फोटोग्राफर यी मोर्चामा हुन्थे र तिनले पठाएको खबर कतै न कतै देखाइन्थ्यो वा छापिन्थ्यो ।
अहिले पनि यी तिनैवटा समूह हिंस्रक झडपबीच छ तर तिनको समाचार कहीँ कतै छैन । मानिसहरु अब घरभित्र पसेर मारपिट गरिरहेका प्रहरीको भिडियो आफैँ रेकर्ड गरिरहेका छन् ।
गल्लीमा पसेर प्रहरीको हिंसाका निक्कै धेरै भिडियो रेकर्ड गरिएको छ । मानिसलाई भिडियो मानिस माझ पुग्नुपर्छ भन्ने लाग्छ र फेरि यो पत्रकारदेखि लिएर त्यो पत्रकारसम्म भिडियो पठाइन्छ ।
भिडियो एकले अर्कोलाई शेयर गर्दा पठाउने क्रममा एक प्रकारको वृतको निर्माण हुन्छ । बाहिरी संसारसँग सम्पर्क टुट्छ । यो स्थितिलाई मिडियाको असफलता भन्नुपर्छ ।
मिडिया असफलताका केही लक्षणहरु छन् । मिडियाको असफलता जनता र मिडियाबीचमा मात्र भएको छैन, मिडियाभित्रै पनि भएको छ । पत्रकार र तिनको सञ्जालको बीच पनि भएको छ ।
हरेक भिडियो कुनै न कुनै पत्रकारसम्म पुगिरहेको छ तर उनीहरु भिडियो हेरेर तिनलाई डिलिट गरिरहेका छन् ।
केही आफ्ना च्यानल वा पत्रिकाको सामाजिक सञ्जालका ग्रुपमा त भिडियो हाल्छन् तर त्यहाँ पनि कुनै जवाफ आउँदैन । अनि रिपोर्टर पाखा लाग्छन् ।
बाध्य भएर केही पत्रकार तिनलाई आफ्नो इन्स्टाग्राममा हालिरहेका छन् या पुनः ट्वीटरमा पोस्ट गरिरहेका छन् ।
तर त्यो भिडियोलाई त्यो समाचार च्यानल वा पत्रिका आफ्नो ट्वीटर ह्याण्डल वा इन्स्टाग्राममा पोस्ट गर्दैनन् । न प्रमाणित गरेर त्यसको समाचार बनाउँछन् । जबकि पत्रकार र न्यूज च्यानल दुवै एक अर्कोलाई फलो गर्छन् ।
मानिसहरुले समाचार च्यानलको ट्वीटर ह्याण्डलमा पनि यस्तो धेरै भिडियो पोस्ट गरेका छन् तर कसैले केही गरिरहेको छैन । मिडिया असफलताको स्थितिमा मानिसमा खास प्रकारको मनोवैज्ञानिक दबाब बन्छ । तिनको आशंका थप गहिरो हुन्छ ।
शनिबार उत्तर प्रदेशको मुजफ्फरनगर, लखनऊ र बिहारको फुलबारी शरीफ र औरंगाबादका कयैन भिडियो आए । प्रहरी घर र गल्लीमा पस्दै गोली चलाएबाट मानिसहरु आतंकित हुँदै गएका छन् ।
सरकार सुनिरहेको छैन । प्रहरीमाथि भरोसा छैन । मानिसले मिडियाबाट जवाफ नपाइरहेको अवस्थामा मानिसहरु नातेदारदेखि लिएर साथीहरुको समूहमा भिडियो र सूचनालाई पु-याइरहेका छन् । रातभर जाग्न थाल्छन्, विभिन्न प्रकारको आशंकाबाट घेरिन्छन् ।
मुजफ्फरनगर र दिल्लीको दरियागंजलाई लिएर अचानक रातमा कयैन मानिस हामीलाई वकिलको आवश्यकता रहेको लेखिरहेका छन् । वकिलका समूह आफ्नो नम्बरसँगै म्यासेस लेखेर जसलाई सहयोगको आवश्यकता छ, हामीलाई सम्पर्क गर्न भनिरहेका छन् ।
अदालतमा पनि एक प्रकारको भरोसा टुटेको छ । कतै कतै वकिलहरुको पनि गिरफ्तारी गरिएको छ ।
एक म्यासेजमा दिल्लीको कुनै संवादातालाई पठाएर मुजफ्फरनगरको घरमा हालत कभर गराएँ । कोही चाहन्छन् कि संवाददाता लखनऊको घरमा जाउन् । तर कुनै जाँदैन ।
न्यूज च्यानल के गरिरहेका छन् ? यसमा म कसैलाई पनि अपवाद मान्दिनँ । सब एकै प्रकारको काम गरिरहेका छन् । बहस गरिरहेका छन् ।
जुन समय रिपोर्टिङको आवश्यकता हुन्छ, फिल्डमा प्रहरी कुन प्रकारको हिंसा गरिरहेको छ भन्ने गएर हेर्ने आवश्यकता छ ।
प्रहरीको कुरामा कति सत्यता छ, त्यो समय मिडिया आफ्नो स्टूडियोमा बन्द छ । ऊ प्रहरीको कुरामा मात्र चलिरहेको छ । त्यसलाई सत्य मानिरहेको छ ।
आफ्नो विश्वास, समय र महिनाको हजार–पाँच सय दिएका जनतालाई मिडियाले छोडिसकेको छ । तिनको हातबाट चौथो खम्बाको हैसियत गुमाएको छ । च्यानलले बहसको शैलीलाई निकालेको छ ।
जो पत्रकार यी प्रदर्शनलाई रिपोर्टिङ गरिरहेको छ, तीमाथि हिंसा भइरहेको छ । हिंसामा पर्नेहरु धेरैजसो पत्रकार अल्पसङ्ख्यक समुदायका छन् । तिनलाई धर्मको कारण निशाना बनाइएको छ ।
लखनऊमा ‘द हिन्दू’ का पत्रकार उमर राशिदलाई प्रहरीले पक्राउ ग-यो । दुई घण्टासम्म उनीमाथि साम्प्रदायिक टिप्पणीहरु भयो ।
‘कमिटी अगेन्स्ट असल्ट अन जर्नलिस्ट’का अनुसार नागरिकता कानूनको विरोध प्रदर्शनको समाचार रिपोर्टिङ गर्ने क्रममा १४ पत्रकार घाइते भए । यसमा कुनै पत्रकार आफ्नै जोखिममा बेव पत्रकारिता गर्नेवाला छन् ।
शाहीन अब्दुल्लालाई जामिया मिलिया इस्लामियाको हिंसाको समय प्रेस कार्ड देखाएपछि पनि पिटियो । बीबीसीका पत्रकार बुखरा शेखले प्रेस कार्ड देखाउँदा उनीमाथि गाली बस्र्यो । उनको फोन खोसियो ।
पल पल न्यूजका शारिक अदल युसूफ लाठी चार्जका कारण घाइते भएका छन् । प्रहरीले प्रेस कार्ड लियो । फोन फुटायो । फ्रिलान्स पत्रकार कविश अजीजले पनि यो अवस्था भोगे ।
पटनामा रिपब्लिक टीभीका पत्रकार प्रकाश सिंहसँग पनि राष्ट्रिय जनता दलका समर्थकहरुले धक्का–मुक्का गरे र उनलाई आफ्नो काम गर्न रोके । यी सबैमा मिडिया मौन थियो ।
मिडिया असफलता अर्को लक्षण पनि छ । अहिले मिडिया आफ्ना साथीहरुसँग हुने हिंसालाई लिएर मौन हुन्छ, भीड पनि पत्रकारसँग हिंसा गर्छ र प्रहरी पनि तर पनि कोही एकअर्काको समर्थनमा आइरहेका छैनन् ।
सबै ठाउँमा मानिस मिडियामाथि हिंसा गरिरहेका छैनन् तर कयैन् स्थानमा ‘मिडिया गो ब्याक’को नारा लागेको छ, शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक तरिकाबाट । दिल्लीको प्रदर्शनस्थल जन्तर–मन्तरमा यस्तो नारा खुब लागेको छ ।
परिस्थिति अनौठो छ । पत्रकार जुन संस्थानमा छन्, ती रिपोर्टिङ गर्दैनन् । जुन संस्थानको लागि रिपोर्टिङ गर्न जान्छन्, त्यहाँ भिडबाट घेरिन्छन् । यो असफलताको सबैभन्दा बलियो प्रमाण हो ।
मानिसमा रहेको मिडियाप्रतिको विश्वास टुट्यो र मिडिया आफ्नै मिडियाकर्मीको भरोसा तोडिरहेका छन् ।
जसरी एक सर्वसाधारण अखबार वा च्यानलअघि लाचार छ, त्यसरी नै रिपोर्टर या प्रस्तोता आफ्नो संस्थानभित्र लाचार उभिएको छ ।
तर आफ्नो संस्थाको हरेक कुराप्रति नतमस्तक पत्रकारमा यो समस्या छैन । तर तिनमा पत्रकारमा हुने कुनै पनि गुण बाँकी पनि छैन । अर्थात मिडियाको प्लाटफर्म तिनको हातमा छ जसको काम पत्रकारित होइन ।
यो बीच सरकारले मिडियालाई राष्ट्रविरोधी शक्ति बलियो हुने सामाग्री प्रस्तुत नगर्न सल्लाह दिएको छ । खासमा भन्नुपथ्र्यो–मिडियाले जनताको आवाज देखाउन् । जनताको आवाज नरोकुन् । त्यसो भए लोकतन्त्रमाथि आशंका र हताशा फैलिन्छ ।
तर कयैन यस्ता भिडियो बाहिर आएका छन् जसमा सत्तारुढ भाजपाका नेता नागरिक कानुनको विरोध गर्नेहरुलाई गोली ठोक्ने कुरा गरिरहेका छन् ।
दिल्ली र कटिहारबाट यस्ता भिडियो आएका छन् । भाजपाका नेताहरु विरोधीलाई किरा भनिरहेका छन् । भाजपाका सांसद जामियाका छात्रालाई आतङ्कवादी भन्छन् तर मिडिया मौन छ ।
तिनको गोली हान्ने भाषामा राष्ट्रविरोधी गतिविधि देखिँदैन ? एक प्रकारले मिडिया प्रहरीको हिंसा र सरकारको समर्थकको ह्रिंसक भाषाको पक्षमा आइसकेको छ ।
यो मौनता खतरनाक हुन्छ । मानिसहरुका सामु भाइरलनै अन्तिम विकल्पको रुपमा बचेको छ । यो सही सूचनाको खोजमा भाइरल गरिरहेका छन्, तिनलाई एक प्रकारको ज्वरो आएको छ ।
भाइरलको एउटा अर्थ ज्वरो पनि हुन्छ । हामीले कुरा गरेको मिडिया भाइरल ज्वरोको रुपमा पनि हुन सक्छ वा सनकको रुपमा पनि । यही मिडिया असफलता(ब्रेकडाउन) हो ।
#रविश कुमार #मिडिया
बानेश्वरमा माधव नेपालसँग विष्णु पौडेलले किन गरे चार घण्टा गोप्य भेट ?
शितल निवासमा माधव नेपालसँग राष्ट्रपतिले के भनिन् ?
‘पञ्चायती शैलीमा सडकमा ओलीको जयजयकार’
१. जोरबिजोरको नियमलाई कडाइका साथ पालना गराउन चेकजाँचलाई तिव्रता
२. मनकारी विनोद चौधरी : सिजी मलमा ४ महिनाको भाडा छुट
३. सडक सञ्जालमा देखिने गरी काम गरिरहेका छौँ : भरतपुर महानगर प्रमुख रेनु दाहाल
४. नेकपाभित्रको अन्तरसङ्घर्षको मूल्याङ्कन
५. बर्सेनि पहिरोकै पिरलो, वर्षाले झनै जोखिम बढायो
६. कालीगण्डकीमा टिपर खस्दा चालक बेपत्ता
७. प्रधानमन्त्री ओलीले शंकर पोखरेललाई भने ‘ए, तपाईं पनि नेता हुनुभएछ, हैन त ?’
८. १४ औं महाधिवेशनबाट कांग्रेसको नेतृत्व परिवर्तन हुनुपर्छ : प्रकाशमान सिंह
९. बालुवाटारमा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डबीच वार्ता सुरु
१. बानेश्वरमा माधव नेपालसँग विष्णु पौडेलले किन गरे चार घण्टा गोप्य भेट ?
२. शितल निवासमा माधव नेपालसँग राष्ट्रपतिले के भनिन् ?
३. ‘पञ्चायती शैलीमा सडकमा ओलीको जयजयकार’
४. ‘नेकपा’ फुट्नबाट जोगिएकै हो ? के भन्छन् नेताहरु....
५. किन आफ्नै अभिव्यक्तीले विवादमा पर्दैछन् प्रधानमन्त्री ओली ?
६. उपत्यकाका टोलटोलमा फैलियो कोरोना, यी हुन् संक्रमित भेटिएका ७१ ठाउँ
७. नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा मेघौलीको नदी तटीय क्षेत्रको अवलोकन